မောင်ထိပ်ကွက်ကို နှိပ်စက်သူ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မောင်ထိပ်ကွက်ကို နှိပ်စက်သူ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ပြီ
မောင်ထိပ်ကွက်ကို နှိပ်စက်သူ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အင်တာနက် သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ ပြန် ့နှံ ့ခဲ့တဲ့ မောင်ထိပ်ကွက်ဆိုတဲ့ ၉ နှစ်အရွယ် ခလေးရဲ့ သတင်း ကို Dvb မှာတွေ ့လို့ရှဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်း စကြားမိတုန်းက သိပ်စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါ။ အင်တာနက်က ပြန် ့လာတဲ့ သာမန် သတင်းတစ်ခုလို ့ပဲ ထင်ခဲ့မိတယ်ဗျ။အဲ..ဒီနေ ့မှ မောင်ထိပ်ကွက်ကို နှိပ်စက်သူ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ပြီဆိုတော့ မှ တစ်ကယ်ပါလားဆိုပြီး အင်တာပျက်ပေါ်လျှောက်ကြည့်၊အဲတော့ မှ ပုံတွေပါတွေ ့ရပြီး ဒီကလေး ဘယ်လောက်ခံရသလဲ ဆိုတာသိတော့တယ်။ ပုံတွေထဲမှာကြည့်ရတာတော့ ကျက်သီးထစရာ။ဒါကြောင့်လဲ ဒီသတင်းဟာ တော်တော်ပြန် ့နှံ ့ခဲ့ပြီး ဝိုင်းဝန်း ကူညီခဲ့ကြတာပေါ့လေ။တော်ပါပြီ။လျှာမရှည်တော့ပါဘူး။
သတင်းနှင့်ပုံတွေကိုတော့ DVB,Eleven Media ,strawberrywine.ning.com and mgnaychi.org နှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျ။
ဧရာဝတီတိုင်း​ ဟင်္သာတမြို့​က ၉ နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့​က​လေး​ငယ် ​မောင်ထိပ်ကွက် (​ခေါ်) စိုး​ထက်​အောင်ကို အပြင်း​အထန်နှိပ်စက်သူ ကိုစနိုး​ကို ဟင်္သာတမြို့​နယ် တရား​ရုံး​က ​ထောင်ဒဏ် ရ နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီ​နေ့​ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်​နေ့​ မွန်း​လွဲမှာ အမိန့်​ချလိုက်တာလို့​ ​မောင်ထိပ် ကွက်ဘက်က လိုက်ပါ​ဆောင်ရွက်တဲ့​ မြို့​နယ်ဥပ​ဒေအရာရှိ ဦး​မောင်​မောင်ကြည်ဝင်း​က ​ပြောပါတယ်။
“ကျ​နော်တို့​ဘက်က တရား​ရုံး​က​နေ ချနိုင်တဲ့​အတိုင်း​အတာက​နေ အာဏာအပြည့်​ချတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ​တော်ဘက်က တရား​မျှတတယ်လို့​ ကျ​နော်တို့​ ​ပြောလို့​ရပါတယ်။ တရား​ခံဘက်က​တော့​ ပြစ်ဒဏ်များ​တယ်လို့​ ထင်ရင် အဆင့်​ဆင့်​ တရား​ရုံး​တွေမှာ အယူခံဝင်​ရောက်ဖို့​ သူ့​မှာ အခွင့်​အလမ်း​ ရှိပါတယ်။”
ပုဒ်မနှစ်ခုစလုံး​ပေါင်း​ ၈ နှစ်ကျခံရမှာဖြစ်​ပေမယ့်​ မြို့​နယ်တရား​ရုံး​အ​နေနဲ့​ စီရင်ပိုင်ခွင့်​အများ​ဆုံး​ ရ နှစ်ဖြစ်တာ​ကြောင့်​ ရ နှစ်ချမှတ်တာလို့​ ဦး​မောင်​မောင်ကြည်ဝင်း​က ​ပြောပါတယ်။
“ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပ​ဒေပုဒ်မ ၃၂၆ အရ ​ထောင်ဒဏ် ရ နှစ်၊​ ပုဒ်မ ၃၄၂ အရ ​ထောင် ၁ နှစ်၊​ ပြစ်ဒဏ်များ​ကို တ​ပေါင်း​တည်း​ ကျပါ​စေလို့​ ချမှတ်ပါတယ်။ တ​ပေါင်း​တည်း​ ကျခံ​စေဆို​တော့​ အများ​ဆုံး​ကို ယူရပါတယ်။ ပြစ်မှုဥပ​ဒေအရ တရား​ခံ အပြစ်ရှိတယ်၊​ မရှိနဲ့​ အပြစ်​ပေး​ဖို့​ဟာကိုပဲ ဆုံး​ဖြတ်တာပါ။ ​လျော်​ကြေး​ပေး​တယ်ဆိုတာက တရား​မ​ကြောင်း​အရ စွဲဆိုမှ ရတာပါ။”
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပ​ဒေပုဒ်မ ၃၂၆ ဟာ တသက်တကျွန်း​ဖြစ်​စေ၊​ ၁ဝ နှစ်အထိ ​ထောင်ဒက်တမျိုး​ ဖြစ်​စေ ချမှတ်နိုင်ပြီး​ ပုဒ်မ ၃၄၂ က​တော့​ တနှစ်အထိ ​ထောင်ဒဏ်ဖြစ်​စေ၊​ တ​ထောင်အထိ ​ငွေဒဏ်ဖြစ်​စေ၊​ နှစ်ရပ်စလုံး​ဖြစ်​စေ ချမှတ်ရမယ်လို့​ ဥပ​ဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်း​ထား​ပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ မြို့​နယ်တရား​ရုံး​မှာ အများ​ဆုံး​ပြစ်ဒဏ် ရ နှစ်သာ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်​ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
you and me လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စား​ပွဲထိုး​လုပ်​နေတဲ့​ ​မောင်ထိပ်ကွက်ကို ဆိုင်ရှင်သား​မက် ကိုစနိုး​က ကြိုး​တုပ်ရိုက်နှက်၊ မီး​ပူနဲ့​ကိုယ်လုံး​တွေကို ကပ်လို့​ ဒဏ်ရာအပြင်း​အထန်ရခဲ့​ပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ ကိုစနိုး​ရဲ့​ ဇနီး​သည်ပါ ပါဝင်တယ်လို့​ ကာယကံရှင် က​လေး​ငယ် ​ပြော​ပေမယ့်​ တရား​ရုံး​ ထွက်ဆိုတဲ့​အချိန်မှာ ​ပြောဆိုတာမရှိတဲ့​အတွက် ကိုစနိုး​ရဲ့​အမျိုး​ သမီး​ကို တရား​မစွဲတာလို့​ ဦး​မောင်​မောင်ကြည်ဝင်း​က ​ပြောပါတယ်။
သူ့​အတွက် အမှတ် (၁) ရဲစခန်း​က တရား​လိုအဖြစ် အမှုဖွင့်​ဆောင်ရွက်ခဲ့​ဖြစ်ပြီး​ ကျူး​လွန်သူ ကိုစနိုး​ကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပ​ဒေပုဒ်မ ၃၂၆ အပြင်း​အထန်နာကျင်​စေမှုနဲ့​ ပုဒ်မ ၃၄၂ မတရား​ချုပ်​နှောင်မှု စတဲ့​ ပုဒ်မနှစ်ခုနဲ့​ တရား​စွဲဆိုထား​တာဖြစ်ပြီး​ ဒီက​နေ့​ အပြီး​သတ် အမိန့်​ချမှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုချမှတ်ထာနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ ကာကွယ်မြှင့်​တင်သူများ​ ကွန်ရက်အဖွဲ့​ဝင်တဦး​က အခုလို ​ဝေဖန်ပါတယ်။
“ပြစ်ဒဏ်က တ​ပေါင်း​တည်း​ ကျခံတာက​တော့​ ကျ​နော်တို့​ မ​ကျေနပ်ဘူး​။ ဘာလို့​လဲဆို​တော့​ ကျ​နော်တို့​ လူအခွင့်​အ​ရေး​ဟော​ပြောပွဲကို လုပ်ခဲ့​တဲ့​ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်း​က ကိုမြင့်​နိုင် အရိုက်ခံရတုန်း​က အရိုက်ခံရတဲ့​ ကိုမြင့်​နိုင်ကလည်း​ ​ထောင်ကျတယ်။ အဲတုန်း​က​တော့​ ပြစ်ဒဏ်က တ​ပေါင်း​တည်း​ အကျမခံရဘူး​။ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ဟော​ပြောပွဲက နှစ်ရွာလုပ်တယ်။ တရွာမှာလုပ်တဲ့​အမှုတမှုကို ​လေး​နှစ်၊​ ​လေး​နှစ်နဲ့​ တရပ်ကို ရှစ်နှစ်အကျခံရတယ်။ အခု ဒီလို လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ကို ချိုး​ဖောက်တဲ့​လူကို​တော့​ တ​ပေါင်း​တည်း​ ကျခံရပြီး​ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ကို မချိုး​ဖောက်နိုင်​အောင် ပညာ​ပေး​ ​ဟော​ပြောတဲ့​လူကို​တော့​ တရပ်ဆီကျခံတယ်ဆိုတာက​တော့​ ကျ​နော် တရား​သူကြီး​ကိုလည်း​ မ​ကျေနပ်ဘူး​၊​ ဥပ​ဒေအရာရှိ ​မောင်​မောင်ကြည်ဝင်း​ကိုလည်း​ မ​ကျေနပ်ဘူး​။ အဲဒါက​တော့​ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ ကာကွယ်မြှင့်​တင်သူတ​ယောက်အ​နေနဲ့​ ​ပြောတာပါ။”
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ခလေးနှိပ်စက်ခံရပုံကို Eleven Media မှာ ဖတ်ချင်ရင်
ဓါက်ပုံတွေတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဓါက်ပုံတွေမြင်ရတော့ ထင်ထားတာထက် ပိုရက်စက်တယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ တရားဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုမှ ကလေးပုံ မြင်မိတယ်။
တကိုယ်လုံး မီးပူရာတွေနဲ့ တော်တော် ပူပြီး နာကျင်ခဲ့မှာပဲ.. သနားစရာ ကောင်းလိုက်တာ..
ဒီလိုလူစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေကို ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်၊ဒါမှ ဥပဒေဆိုတာရှိတယ် ဥပဒေအထက်မှာဘာမှမရှိစေရ။(တကယ်လုပ်ရင်ပြောတာပါ။)
ကျုပ်ဒီသတင်းကို ဆယ့်တစ် ဆိုက်မှာဖတ်ရတယ်ဗျ
ဒီသတင်းကို လူတွေစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ မန်းထားတာပါ
( ဒါကတော့ အတည်မပြုနိုင်တဲ့သတင်းပါ )
ဒီကလေးကို ဒီလိုလုပ်တဲ့ လူဟာ
ခုဟာက သေသေချာချာကို နှိပ်စက်တာဆိုတော့ ဒီခွေးမသား
ကြည့်ရတာ သူမိန်းမဆိုတဲ့ ခွေးမသမီးကမြှောက်ပေးတာကို
ငတိလေးက ခွေးကိုရိုက်လို့လားဘာလားလို့တော့ ပြောတာဘဲ
ပြောလို့ရတာဟုတ်ဘူး မတော် သူ့စိတ်နဲ့မတည့်လို့
ကျုပ်ရဲ့ မူးစုပဲစု တစ်ရွာလုံးအမုန်းခံပြီးမန်းလို့ရထားတဲ့
ကျနော်လဲ ဒီအကြောင်းကို အမှတ်တမဲ့ ဒီအောက်မှာ ဖတ်ဖူးခဲ့တယ်ဗျ
ဒါပေမဲ့..သူတို ့ပြောသလောက် မဆိုးခဲ့ဘူးပဲ ထင်တာပါ
ဒါကြောင့်လဲ စိတ်မဝင်စားခဲ့သလို ဘာမှလဲ ဝင်မပြော၊ဒီအကြောင်း လေ့လာခြင်းလဲ မလုပ်ခဲ့ဘူးဗျ
ဒီနေ့မှ လိုက်ရှာကြည့်တော့ ဓာတ်ပုံတွေပါတွေ ့ရတာနဲ့တင်ပေးလိုုက်တာပါ
ဒါကြောင့်လဲ လူတွေမခံနိုင်ဖြစ်ပြီး ခုလို လူသိရှင်ကြား ဖြစ်ကုန်တာပါ..
ဒီလူတွေ ရက်စက်လွန်းအားကြီးတယ်။ ဒဏ်ရာ ၁ချက်ကို ၁မှုဖွင့်သင့်တယ်။ နောက်ဒီလိုရက်စက်တဲ့သူတွေပေါ်မလာအောင် မလုပ်ရဲအောင် တနည်းနည်းနဲ့ Unclegyi1974 ပြောသလို စဉ်းစားသင့်တယ်။
ဒီလို နှိပ်စက် ရင် ထောင် ဒဏ်ကျခံရနိုင် တယ် ဆိုတယ့် အတွေး တွေ နှိက်စက်ရိုင်းစိုင်း သူတွေရဲ့အတွေး ထဲ ဝင်သွားရင် အ နှိပ်စက်ခံလူတန်း စားတွေ အတွက် အရမ်း ကံကောင်း သွားမှာပါ။
ဒါဟာ လောလောဆယ် ဒီသတင်းကို အာရုံစိုက်နေသူ တွေ ကို တစ်ကောင်ကျွေး ( ကျားစကား ၊ မြန်မာ ကျားထိုးခြင်း ကျားထိုးခြင်း ဆိုသည် မှာ ကျား ကစားသည် ဟု ဆိုသည် ။ ယနေ ့ခေတ် တွင် ဆိုက်ကားဂိတ် လဘက်ရည် ဆိုင်များ တွင် တွေ ့နိုင်သည် ) နှစ်သိမ့်လိုက်သည့် သဘော ဖြစ်နိုင်သည် ။
ကလေး ကိုနှိပ်စက်ထားတာရက်စက်လိုက်တာ …
ထောင်ဒဏ် (7) နှစ်က နည်းတောင်နည်းသေးတယ်
ဒါမှ..ဒီလို ခွေးစိတ်ပေါက်တဲ့လူတွေ ..မှတ်မှာ
ခွေစိတ်ပေါက်နေတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး… ဘာလို.လဲဆိုတော့ ခွေတွေတောင် သူတိုနဲ.မျိုးတူ ဆိုရင်… တစ်ကောင်နဲ.တစ်ကောင်.. စားခွက်လုတာကလွဲလို. ဟောင်တာကလွဲလို. မလုပ်ကြဘူး…
ခွေးထက် ဆိုးတဲ့ လူတွေပဲနော်…
ထောင်ဒဏ် ရ နှစ်က ယောကျာ်းဖြစ်သူကိုပဲ ချခံစေခဲ့တာ မတရာဘူး … မိန်းမနဲ့ ကလေးလည်း အလိုတူအလိုပါပဲလေ … ပြစ်မှူမြောက်အောင် ကူညီသူထဲမှာ သူတို့လည်းပါတယ် … ဒီတော့ … ထောင်ဒဏ်မဟုတ်လျှင်တောင် ငွေဒဏ်လောက်တော့ ချမှတ်သင့်ပါတယ် … ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း …သူတို့လုပ်သလို ခွေးချေးပြန်ကျွေးပြီး သေးပြန်တိုက်လိုက် !!!!!!!!!
ဘာတွေ မကျေနပ်ချက်ရှိလို့ ဒီလောက်တောင် ရက်စက်ရတာလဲ ဗျာ… စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ…
အမိမဲ့သား ရေနည်းငါး တဲ့။ သနားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ တဆက်တည်း စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ခုတစ်လော ရေးနေကြတဲ့ sex ကိစ္စတွေဟာလည်း ဒီလို ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။
ဒီခလေးရဲ့ ဒဏ်ရာအမြန်ကုသဘို့နဲ့ ခလေးရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက် လည်း ဝိုင်းကူညီကြဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
အဲ့သည့် နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ စနိုးဆိုတဲ့ ကောင်ရဲ့ ပုံရော တင်လို့ရရင် တင်ပေးကြပါလား၊ ဘယ်လောက် ကျက်သရေတုံးလဲ ဆိုတာ မြင်ဖူးချင်လို့…..